सांसद नै भूमाफियाको पक्षमा लागेपछि...
उद्योग व्यवसायका नाममा जग्गा लुकाई हदबन्दी छल्दै आएका केही प्रभावशाली व्यक्ति राजनीतिक पहुँचका बलमा कानुनै बनाएर आफू ‘सुरक्षित’ हुन लागिपरेका छन्। विगतमा कर्मचारीतन्त्रले उनीहरूको प्रयासलाई असफल तुल्याउँदै आएपछि सरकारले कानुन संशोधन गरी जग्गा सुरक्षित बनाउ लागेको हो।
उनीहरूले त्यो जग्गाको समुचित प्रयोग गरेका छैनन्। हदबन्दी छुटमा लिएको जग्गा ‘प्राइम लोकेसन’ मा र मूल्यवान छन्। एउटा प्रयोजनका लागि लिएका जग्गा अर्कै प्रयोजनका लागि उपयोग गरिएको छ। कतिपय जग्गा प्लटिङ गरेर बेचिएको छ भने कतिपय जग्गा बाँझै छन्।
हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बेच्न पटकपटक प्रयास नभएका होइनन्। तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री रामकुमार सुब्बाले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बेच्न मन्त्रिपरिषद्मा लगेका थिए। तर तत्कालीन मुख्य सचिवका कारण सुब्बाको प्रस्ताव असफल भएको थियो।
‘जग्गा सट्टापट्टा गर्न पाउने हो भने किन चाहियो हदबन्दी ? ’ उनले भने, ‘हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरिदिए भइगयो नि ? ’ हदबन्दी लागू नगर्ने उद्देश्यले विधेयक आएको उनको तर्क छ। एउटै व्यक्तिले ५÷१० वटा कम्पनी खोल्ने, एउटा कम्पनी फस्टाएको देखाउने अनि अरू सबै घाटामा देखाउने गिरोहले यो विधेयक ल्याएको हो।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको प्रस्तावमा सट्टापट्टाको व्यवस्था स्पष्ट थिएन। सांसदहरू भूमाफियासँग प्रभावित भएर यो व्यवस्था थप गरिएको हो। भूमिअधिकारकर्मी बस्नेतले घाटामा गएका कम्पनीको सन्दर्भमा समिति बनाएर, त्यसको प्रतिवेदनअनुसार मात्रै सट्टापट्टा वा बेच्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
पूर्वनिर्देशक सिंहका अनुसार व्यक्तिकै नाम राखिएको जग्गा टाठाबाठाले लुकाए, लुकाएको जग्गा बिक्रिवितरण र सट्टपट्टा भए। ‘सोझासाझाले सरकारलाई दिए तर टाठाबाठा र पहुँचवालाले लुकाए,’ उनले भने,‘ व्यक्तिकै नाम राख्न दिए सरकार त्यतिबेलै चुक्यो।’ हदबन्दी छुटको जग्गाको सम्बन्धमा पटकपटक विभिन्न आदेशसमेत जारी भएका छन्। पछिल्लो समयमा २०६८ साल र २०७४ सूचित आदेश जारी गरियो। २०६८ सालको आदेशमा भूभिसुधार कार्यालयले छुट दिनसक्ने व्यवस्था गरियो तर २०७४ सालमा आएर अझ खुकुलो परियो। उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनीको निवेदनको आधार सम्बन्धित विभाग, मन्त्रालयको सिफारिसमा छुट लिन सक्ने व्यवस्था गरियो। उनले २०७४ को आदेशले हदबन्दी छुटसम्बन्धी व्यवस्था अझ खुकुलो बनाइएको बताए। अन्नपूर्ण पोस्टबाट